Uru puru iche nke egwuregwu n'èzí | Oge opupu ihe ubi - ULLER
Nnọọ oge opupu ihe ubi ... Oge ahụ ebe ọnọdụ okpomọkụ dị mma, anyanwụ na-enwu ma ị chere na oge oyi na-apụ kpamkpam!
E gosipụtara iberibe obi ụtọ a iji kpalie anyị ịme egwuregwu n'èzí. A na-ekwukarị na omume bụ ihe anyị na-eme kwa ụbọchị, na ndị ọzọ bụ ndị ọzọ.
N'oge opupu ihe ubi ike anyị na-agbanwe, anyị nwere ike ịzụ ndị enyi anyị, gaa maka ịgba ọsọ ma ọ bụ mee mgbatị ndị na-anaghị achọ akụrụngwa, anyị nwere ike ịme ya kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ n'ihi na anwụ na-awa ogologo oge ugbu a ma ọ dị ka ụbọchị ahụ ga-adịgide toro ogologo. Ebumnuche bụ iji gburugburu gị mee ihe ma kpalie gị site na ihe ndị ị nọ gburugburu.
Agbanyeghị, n'ezie, ọ bụghị naanị ịpụ apụ ịme egwuregwu, ebe ị na-eyi, jiri ọzụzụ gị! Usoro ọzụzụ dị iche iche dị iche iche karịa nke ị nwere ike ime na mgbatị ahụ ị tụkwasịrị obi, ị nwekwara ike ịhọrọ n'etiti ịga njem njem, ịnya igwe kwụ otu ebe, ịga igwu mmiri, ịgba ọsọ, ma ọ bụ ịga ogige / ugwu / osimiri mee usoro mgbatị ahụ gị.
Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ na-agbanwe ná ndụ gị ugbu a ma ị kabeghị ya na ndepụta nke omume gị, mmiri nwere ike ịbụ oge kachasị mma iji were ya.
Na nke a, anyị na-enye gị uru niile nke mmega ahụ na egwuregwu na ụfọdụ echiche maka usoro egwuregwu n'èzí nke nwere ike ịbụ nduzi egwuregwu ime n'oge ọnwa ezigbo ihu igwe.
Ghọta uru na uru ọ bara na ị ga-esi n'èzí egwuregwu!
Ọzụzụ n'èzí nwere uru ndị na-emetụta ọdịmma, ùgwù onwe onye na mkpali. Trainingkụzi ihe dị ka nkeji iri atọ n'èzí kwa ụbọchị zuru ezu iji malite ịhụ mgbanwe dị mma na ahụike na ahụike anyị, n'ihi na n'etiti nsonaazụ kachasị pụta na ngwa ngwa, anyị na-ahụ mmụba na ogo ike, ike dị ukwuu, na mbelata nchegbu na irascibility nke ụbọchị ruo ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị eleruo ha anya nke ọma, anyị ga-abanyekwu na uru egwuregwu bara na ndụ dị mma.
Nke mbụ, anyị ga-amata ọdịiche dị n'etiti ịme egwuregwu maka ahụ ike, yana uru mmụọ bara uru nke egwuregwu:
Anyị na-ahụ uru nke egwuregwu maka ahụike anụ ahụ na:
Mmetụta nke Sun
Icingme egwuregwu n'èzí nwere nnukwu uru, ọkachasị ugbu a na ihu igwe dị mma na ụbọchị anwụ na-acha, arụ ọrụ nke metabolism. Ọzọkwa, ikpughe anyanwụ n’ehihie pụrụ inyere anyị aka ihi ụra nke ọma karị n’abalị ma melite ịrụ ọrụ nke ọma. Ọzọkwa, mgbe anyị na-azụ n'èzí, anyị na-ekuru ezigbo ikuku oxygen, nke na-enyere anyị aka ịgbanye mkpụrụ ndụ aka ma na-enyere aka n'ịlụso ọrịa ọgụ. Cheta na ichebe onwe gị mgbe niile site na anyanwụ ka ikuku radiation ultraviolet nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ, ọkachasị n'oge kachasị elu.
Ndị gosipụtara ọzụzụ n'èzí karịa n'ime ụlọ egosila na ha nwere obere cortisol, homonụ metụtara nrụgide. Kama, ha nwere ogo dopamine, serotonin, na endorphins. Anyị na-agbakwunye na ọzụzụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na / ma ọ bụ oghere mepere emepe na-enyere ọbara mgbali aka ịlaghachi na steeti ya ngwa ngwa karịa ma ọ bụrụ na a na-eme ya na mpaghara ndị ekpuchiri ekpuchi.
Mgbe anyị na-eme egwuregwu, na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè karịa, n'èzí, akwara anyị na akwara anyị na-arụ ọrụ n'ụzọ siri ike ma zuo ezu, ebe ọ bụ na n'oge njem anyị na-ahụ mgbanwe na ntụzi, n'ụdị ala na ezigbo enweghị nsogbu.
Mmefu ego caloric
N'ihi ala dị larịị, iguzogide ikuku na ifufe, na ọnọdụ okpomọkụ n'ezie nke gburugburu ebe obibi, mmefu ike nke ahụ anyị mere n'oge mmega ahụ na-abawanye. Tụkwasị na nke ahụ, ike anyị tinyere n’ịga n’ihu n’oge ọsọ ahụ na-adịkarị ukwuu karịa mgbe anyị na-agba ọsọ ọsọ, ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè n’ịgba ígwè.
Gburugburu ebe ahụ dị ụtọ ma na-enye anyị ihe nkwalite nke na-eje ozi dị ka ihe ndọpụ uche. Nke a na-ebelata elekwasị anyị anya na ike ọgwụgwụ nke anụ ahụ na echiche na-adịghị mma wakporo uche anyị.
The kacha nta mmetọ
Agencylọ Ọrụ Nchedo Gburugburu Ebe obibi nke United States (EPA) na ọmụmụ (Kotzias, 2005) na-eme atụmatụ na mmetọ ime ụlọ nwere ike ịkarị okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere gburugburu ebe obibi. Ọnọdụ ụfọdụ na mgbatị ahụ, dị ka ọnụọgụ ndị mmadụ na-eme egwuregwu, igwe ma ọ bụ ọkụ na sistemụ ikuku, nwere ike ịbawanye mmetọ n'ime ụdị oghere ndị a ruo n'ọkwa dị elu ma e jiri ya tụnyere mpụga.
Biophilia bụ mmetụta nke njikọ na ọdịdị na ụdị ndụ ndị ọzọ. Believedmụ mmadụ kwenyere na ha nwere mmekọrịta ebumpụta ụwa maka okike, yana mmekọrịta dị nro na nke mmetụta uche na anụmanụ ndị ọzọ. O yikarịrị ka a na-egbo mkpa ụmụ mmadụ ndị a na-ahụ maka ọdịmma mmadụ n'ụzọ dị mfe karị site n'ịkụziri ha n'èzí karịa ime otu ọzụzụ ahụ n'ime mgbidi anọ.
Uru nke egwuregwu maka ahụike ọgụgụ isi:
Ogologo oge ikpughe na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwekwara ike ime ka ahụike ọgụgụ isi na ụbụrụ rụọ ọrụ, yana ịbawanye ogologo ndụ.
Toga mgbatị ahụ ma ọ bụ etiti kpuchiri ekpuchi, dabere na oge awa n'ụbọchị, nwere ike ịkpata nrụgide. Chọta onwe gi na oghere juputara na ndi mmadu, inwe obi oku na ihere obuna tutu ịmalite ozuzu ahia abughi uzo kachasi nma iji jigide echiche di nma mgbe ị na-eme egwuregwu, nke emeputara iji meputa ihe ozo megide anyi: obi uto na inwe nnwere onwe. Maka nke a, ọzụzụ n’èzí, na mmadụ ole na ole gburugburu, gburugburu ebe ị họọrọ gbara gị gburugburu na ohere niile ị chọrọ, ga-enye gị udo nke udo na nchekwa.
Mgbe anyị na-azụ na mpụga ụlọ, n'èzí, anyị na-eche ihu gburugburu na-agbanwe agbanwe, ọ naghị adị agbanwe ma ọ bụghị n'okpuru njikwa anyị. Anyị kwesịrị imeghari na ya. Ihe a na - enyere aka ime ka ụbụrụ nwee ike ime ka ị mụrụ anya ma mee ka ngagharị na mkpebi gị dị ngwa.
Banyere ùgwù onwe onye
Ọzụzụ na oghere akwụkwọ ndụ nwere ike inwe mmetụta na ọnọdụ anyị yana njiri onwe anyị n'ime nkeji ise nke ịmalite ịmalite ya. Anyị na-alaghachi na mmetụta nke nnwere onwe, ọdịmma na ùgwù onwe onye nke omume a rụrụ na ebe emeghe na-enye anyị. Ọzụzụ n'ime mgbatị ahụ oge ụfọdụ nwekwara ike mebie ma ọ bụ belata ùgwù onwe onye anyị ma ọ bụrụ na anyị chere na enwere anya karịa na obere oghere, ma ị bụ otu n'ime ndị na-eji nzuzo gị akpọrọ ihe mgbe ị na-azụ ọzụzụ.
Mepụta usoro ịme ihe na ịme ya omume anaghị adị mfe mgbe niile mgbe anyị na-ekwu maka ọzụzụ. Ihe ọ thatụ ndị a na-enweta site n'ịdị na-eme egwuregwu n'èzí nwere ike ime ka anyị na-emega ahụ́. Ọtụtụ nnyocha na-egosi na ị na-emega ahụ n'èzí ogologo oge karịa na mgbatị ma ọ bụ n'ụlọ.
Endocrine markers metụtara nrụgide dị ka adrenaline, norepinephrine na cortisol, na-ada mgbe ha na kọntaktị na okike. Ogo nke endorphins nke eme site na ịme egwuregwu adịlarị elu, mana ọ bụrụ na anyị agbakwunye oghere ndụ akwụkwọ ndụ, yana ụlọ ọrụ ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, ndị a nwere ike ịba ụba. Mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dịka nke anyị nwere ike itinye na gburugburu ebe dịpụrụ adịpụ n'ụzọ dị mfe, na-enyere aka melite mkpali nke ndị na-eme egwuregwu ma nyekwuo omume ahụ, na-eme ka ọ dị mkpa ịga n'ihu na-eme ya.
Uru nke egwuregwu dị egwu:
Anyị ga-ekwu maka ụdị egwuregwu ọzọ; egwuregwu ndị gabigara ókè. Omume a dị iche iche ejirila nke nta nke nta bụrụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị eji emefu oge, na-ekpori ndụ n'èzí na adrenaline. Egwuregwu ndị a na-enye anyị ahụmịhe siri ike, dị iche iche na nke pụrụ iche. Kpughepụ ahụ anyị karịa imekwu ihe bụ kpọmkwem ihe kpatara na anyị ga-akpachapụ anya ma lezie anya mgbe ị na-eme egwuregwu dị egwu, nke nwere ike iwetara anyị ọtụtụ elele ma ahụike na ùgwù onwe onye, ​​na-aghọrọ ọgwụgwọ n'ọtụtụ oge. Egwuregwu gabigara ókè ga-enye gị ohere:
Mee ka ikike gị itinyekwu uche
Mgbe anyị chere ihe ịma aka nke njirimara ndị a ihu, anyị aghaghị ịmụta ime ihe n'agbanyeghị ihe ize ndụ. Mgbe anyị gbanwere ụzọ anyị si eche echiche n'ọnọdụ ndị a ma uche anyị pịa, anyị na-eme ka ikike anyị nwere ịdị jụụ ma lekwasị anya n'oge nsogbu.
Jikwaa egwu ka mma
Oge ụfọdụ ụjọ na-akpọnwụ anyị ma gbochie anyị, anyị anaghị azaghachi ihe mkpali ọ bụla n'ihi na anyị anaghị enwe ụjọ. Site na ịme egwuregwu dị oke egwu nke na-agbasa, anyị na-amụta ijikwa ya. Ọ bụ ezie na ọ naghị apụ kpamkpam, enwere nkwanye ùgwù ma ọ bụ mmetụta ọ bụla na-eme ka omume ahụ bụrụ ihe pụrụ iche na nke pụrụ iche.
Gabiga ókè gị
Mgbe anyị ruru ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ merie ihe ịma aka, uche anyị na-ele ngwa ngwa na nke ọzọ. Anyị na-achọ ịchụso ebumnuche dị egwu na ihe ịma aka. Anyị na-agbagha onwe anyị ma nweta nghọta ka ukwuu banyere ikike na ikike anyị.
Nwee obi ụtọ dị egwu
Iche ụjọ anyị na imeri ha bụ otu n’ime ihe ga-esi n’egwuregwu ndị a pụta; Adrenaline etoju nke puputara n’ime anyi di elu nke na ob una mgbe anyi mere ha otutu oge anyi ka n’enwe egwu na afo. Mmetụta a dị egwu bụ ihe na-eme ka anyị ghọta na site na egwuregwu ndị a anyị nwere ike ịnwe mmetụta nke siri ike i emomi n'akụkụ ọ bụla nke ndụ.
Echiche iji mega ahụ́ n’èzí!
MGBE ỌG ING A N’ỌG PGWU
Ọ bụrụ na i bi n’obodo buru ibu, na-enweghị ụsọ osimiri ma ọ bụ ugwu dị nso, gaa na ogige kachasị gị nso! Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma inwe ike ịnụ ụtọ ịdị nso nke oke osimiri ahụ, ma ọ bụ ịdị jụụ nke ebe dị elu nke ahịhịa gbara gburugburu, echekwala ọtụtụ, were ihe gị pụọ n'ụlọ, hụ n'onwe gị uru dị na ịme egwuregwu na mba ọzọ. Anyị na-enyere gị aka ịhazi sekit dị mfe ga-abụ ihe nduzi na ọzụzụ gị. Nwere ike ịmalite ọkụ na-agba ọsọ ruo nkeji 30 ruo 60 ma mgbe ịmechara, gaa n'ihu na ọzụzụ ike. Nwere ike ịme usoro anọ nke mmemme ndị a, mee nkwughachi ndị dabara nke ọma. Nwere ike ịmalite site na ikwughachi ugboro 10 na usoro izizi wee bulie ọnụọgụ ka usoro gị na-aga n'ihu:
Push-ups (nkwụ elu): Debe aka gị n'okpuru ubu, úkwù na ubu kwesịrị ịdị n'ahịrị, ha kwesịrị ịkwaga n'otu oge ahụ, ubu gị, úkwù gị na ụkwụ gị kwesịrị ikwekọ, na isi gị, na-arụ ọrụ.
Squats: Kewapụ ụkwụ gị ma debe ya n’agbata úkwù gị na ubu, na-elegidekwa anya mgbe niile. Welite obi gị ma mee ka isi gị rụọ ọrụ. Debe ibu na ikiri ụkwụ gị ma hụ na ikpere gị n'azụ mkpịsị ụkwụ gị.
Uzo ozo: Weta otu ụkwụ n’ihu site n’ikpere ikpere nke ọzọ ruo mgbe o ruru ala. Kwụ azụ kwesịrị idobe ọtọ. Laghachi na ọnọdụ mbido wee jiri ụkwụ ọzọ na-emegharị.
Burpees: Bilie, buru nnukwu itu ukwu. Ka ị na-agbada, gbagoo n'ọnọdụ plank ma jiri aka gị mee ihe ntinye aka. Ọ bụrụ n’abalị ụbọchị maka mgbali elu, mee ya site na ikpere ikpere gị n’ala.
Na mgbakwunye, yoga ma ọ bụ Pilates bụ ezigbo ọrụ iji bido ma ọ bụ mechaa ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịzụ n'oge ọzọ. Nwere ike izute ndị enyi ma rụọ ọrụ ọ bụla n'ime usoro ọzụzụ abụọ a iji jikọghachi, kwụpụ ma mee ka ahụ sie ike na-enweghị itinye mmetụta dị ukwuu n'ahụ.
Gbaa ọsọ na osimiri
Ọ bụrụ n’inwe obi ụtọ ibi nso n’akụkụ oke osimiri, ị hụrụ oke osimiri n’anya na ihu igwe dị mma, ị nwere ike ịtụgharị ịkwaga mgbatị gị n’akụkụ osimiri. Gba ọsọ n'ụsọ osimiri nwere isi ihe dị mma, dịka na ị na-arụ ọrụ siri ike karị, ebe ọ bụ na mbara ala ahụ, ịbụ aja, na-enye nguzogide karịa ala siri ike. Na mgbakwunye, ị na - eme ka iku ume gị ka mma site na iru mmiri nke oke osimiri na obere nsogbu, ahụ gị ga - enweta nnukwu ikuku oxygen. Ike izu ike nke osimiri na ụda ebili mmiri ga-eme ka uche gị na ahụ gị zuru ike. Ọzọkwa, imebi usoro ahụ na ịgagharị na gburugburu ọhụụ ga-eme ka mkpali gị dịkwuo elu.
Otú ọ dị, anyị na-atụ aro ka ị gbalịa iji akpụkpọ ụkwụ gị na-agba ọsọ, ebe ọ bụ na ájá bụ ala na-enweghị isi ma na-azọ ụkwụ na mkpọda na-enweghị akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịkpata ihe ọjọọ, enweghị nkwado na nlọghachi nwere ike ịkpata nsogbu. Ihe ọzọ ị nwere ike ịnwa itinye n'agbụrụ gị bụ na ị họọrọ ájá mmiri, ya bụ, n'akụkụ oke osimiri. Ala ahụ ga-adịkwu obere ma sie ike ma ị ga - ezere muscular overloads na-erite site na-agba ọsọ na adụ aja.
ATUNMATUN Ugwu: CYCLING
Enwere ọtụtụ mmetụta dị mma mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè ma ọ dịghị mfe ịkọwa ya n'okwu na onye na-ahụbeghị ya na onye mbụ. Na mgbakwunye, ịgba ịnyịnya ígwè bụ ihe na-atọ ọchị, nchekwa ma bara ezigbo uru maka ahụike. Y’oburu n’inwe obi uto banyere igwe igwe igwe, anyi n’acho uzo ufodu igha amaghi:
Ugwu a na-enye ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, ha na-echere gị site n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị a ma ama nke Tour de France ruo ọdụ ụgbọ mmiri Andorran mara mma. elu ugwu site na Mediterenian rue Cantabrian. Zọ nke Ordesa, Monte Perdido ma ọ bụ Aneto bụ usoro dị ọnụ ala karịa, nke ị nwekwara ike jupụta na retinas gị na onyonyo anaghị emebi emebi.
Pgbọ mmiri dịka Lakes nke Covadonga, El Naranco na Angliru nwere njikọ chiri anya na akụkọ ihe mere eme nke ịgba ígwè. Obodo a bụ ebe zuru oke iji chọpụta ụzọ ọhụụ na ịchọpụta ebe ịtụnanya gbara gburugburu.
Girona bụ ebe obibi dịgasị iche iche, ebe Mediterenian na Pyrenees na-agbakọta ebe a. Na mgbakwunye na ọdịbendị ọdịbendị nke ịgbagharị na Salvador Dalí na ịnụ ụtọ ihe nketa ya na pedal.
Inggba egwuregwu n'èzí dị mfe, na-atọ ụtọ ma na-aba ezigbo uru! Na uru nke egwuregwu anyị na-agbakwunye mmetụta dị mma nke ịnọ na oghere ndị na-acha akwụkwọ ndụ, nke gburugburu na ikuku dị ọcha gbara gburugburu, na-ekpori ndụ ụzarị anyanwụ na, n'ikpeazụ, mmetụta nke nnwere onwe.
Nweta onwe gị, kpọọ ndị enyi gị ma nwee ọ theụ n'ọnụ ụzọ mmiri na-eme egwuregwu n'èzí!